Niara-nipetraka hono, ny lahiantitra iray efa mangozohozo sy ny zanany ary ny vinantony niaraka tamin’ny zafikeliny efa-taona. Rehefa tonga hono ny fisakafoanana, dia sorena izy mivady zanany, fa raha tsy mamaky vilia ingahy be, noho ny tanany efa mangozohozo, dia manary vary, very tsisy ny ronono, sady voakitaba izy ireo rehefa eo ingahibe amin’ny fotoana fihinanan-kanina.
Tapa-kevitra hono izy mivady fa aleo atokan-toerana ery an-joron-trano ingahibe no mihinan-kanina, ary vilia hazo no nomena azy fa ireny no tsy mora vaky na mianjera aza.
Sady mifampitazana eo ihany hono, rehefa misakafo, ingahibe eo an-joron-trano, miaraka amin’ny ranomaso mikoriana eo amin’ny tavany ary tonga ao anaty vilia hazo, izy mianakavy kosa, mikorana ery amin’ny latabatra lehibe sady mihaja. Ilay zazalahy kely kosa hono, tsy niteny nahita izany rehetra izany, ary mba latsaka moramora ihany koa ny ranomasony, saingy tsy nisy nahita.
Ny ampitso hono, rehefa hisakafo antoandro, notadiavina ilay zazalahy kely, ka tsy hita! Hay izy ary amin’ny toerana fandrafetana, mitazona tapa-kazo vitsivitsy sy maritoa, tahaka ny mandrafitra zavatra.
Dia nanontany azy izy mivady ray aman-dreniny: Ary inona anaka no ataonao eto"?
Manamboatra vilia hazo ho an’I Dada sy Neny rehefa antitra aho!, hoy ilay zaza
Saiky torana izy mivady nahare izany, latsaka ihany koa ny ranomaso, sady tsy nahita navaly, ary tamin’io fotoana io ihany, dia naverina niaraka nisakafo teo amin’ny latabatra lehibe ihany Dadabe!